Local Media - छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो तर हामीसँग केही सोधपुछ नै गरेन : आनन्दराज बतास
प्रकाशित समय: बुधवार, १० : ५४ बजे पुष २८ गते
'जाँच गर्न बनेको समितिले हामीहरुसँग कुनै सोधपुछ र प्रतिक्रिया लिएन । विवाद आयो, हामी पनि त एक पक्ष हो नि! के हो त कुरा भनेर सोध्ने र हाम्रो कुरा राख्ने मौका हामीले पाउनु पर्ने होइन?' बतासले भने, 'सरकारी समितिले एकपक्षीय रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।'
'समितिले टेन्डर आह्वान गरेपछि हालेको हो। ३५ दिने सूचनामा सकैले पनि टेन्डर हालेनन्, १५ दिन थप गरेपछि हामीले थाहा पायौं र हाल्यौं । तर यसबारे हामीले छानबिन समितिसँग आफ्नो कुरा राख्न नै पाएनौं' उनले भने ।